Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ➡️ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Kani maahan siyaasad asturnaanta, waa caddeynta mabaadi'da.
Aniga oo mas'uul ka ah websaydhkaan, waxaan rabaa inaan ku siiyo dammaanad qaadka sharciga ee ugu weyn ee la xiriira asturnaantaada oo aan kuugu sharaxo sida ugu macquulsan oo daahfuran uguna macquulsan, wax kasta oo quseeya sameynta macluumaadka shaqsiyeed ee shabakadan.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu dhaqan gelayaa oo keliya xogta shaqsiga ee laga helo Websaydhka, looma adeegsan karo macluumaadkaas ay soo ururiyeen dhinacyo saddexaad bogagga kale, xitaa haddii ay ku xiran yihiin Websaydhka.
Shuruudahan soo socdaa waa kuwo waajib ku ah adeegsadaha iyo qofka mas'uul ka ah websaydhkan, marka waa muhiim inaad dhowr daqiiqo qaadato si aad u aqriso haddii aadan taas ku raacsanayn, ha ugu dirin macluumaadkaaga shakhsiyeed websaydhkan.
Nidaamkan ayaa dib loo cusboonaysiiyay 25/03/2018
Ujeeddooyinka qodobbada Sharciga kor ku xusan ee Ilaalinta Xogta Shakhsi ahaaneed, xogta shakhsiga ah ee aad noo soo dirto waxaa lagu dari doonaa Fayl ka mid ah "ISTICMAALAYAASHA WEBSITE iyo SUBSCRIBERS", oo ay iska leedahay Online SL. Faylkani wuxuu hirgaliyay dhamaan tilaabooyinka amniga farsamo iyo abaabul ee lagu aasaasay Xeerka Boqortooyada 1720/2007, ee ku saabsan horumarinta LOPD.
Diritaanka iyo duubista xogta guud
U dirista xogta shakhsiga ah ee websaydhkani waa qasab in lala xiriiro, la faalo, la qoro boggaga blog.online, qandaraas lagu bixiyo adeegyada lagu soo bandhigo degelkan isla markaana lagu iibsado buugaagta qaab dijitaal ah.
Sidoo kale, bixinta macluumaadka shakhsiyeed ee aad codsatay ama aadan aqbalin siyaasadan ilaalinta xogta waxay la micno tahay suurtagalnimada in la qoro waxyaabaha ku jira iyo ka baaraandegista codsiyada websaydhkan.
Khasab maahan inaad bixisid xog shaqsiyeed si aad uga dhexdasho boggaan.
Macluumaadka xogta degelkani u baahan yahay iyo ujeedada
follow.online waxay aruurin doontaa Xogta Shakhsiyadeed ee adeegsadayaasha, iyagoo adeegsanaya foomamka khadka tooska ah, internetka. Xogta Shakhsi ahaaneed ee la soo aruuriyay, waxay kuxirantahay kiis kasta wuxuu noqon karaa, kuwa kale: magac, magac awoow, emayl iyo marin u helid. Sidoo kale, marka la eego adeegyada qandaraas-bixinta, iibsashada buugaagta iyo xayeysiinta, waxaan waydiisan doonaa Adeeg-bixiyeha banki gaar ah ama macluumaad bixinta.
Degelkani wuxuu u baahan doonaa oo keliya xog ku filan ujeeddada aruurinta oo waxaa ka go'an:
Hoos u dhig ka shaqeynta xogta shaqsiyeed.
Si gaar ah u baar xog shaqsiyadeed intii suurta gal ah.
Sii daahfurnaanta howlaha iyo socodsiinta macluumaadka shaqsiyeed ee laga wado websaydhkan.
U oggolow dhammaan isticmaaleyaasha inay la socdaan socodsiinta xogtooda ee lagu sameeyo websaydhkan.
Abuur oo hagaajiso walxaha amniga si ay kuugu soo bandhigaan xaaladaha ugu wanaagsan ee biraawsarka.
Ujeedooyinka xogta laga soo ururiyay Xariirkaan waa kuwan soo socda:
Si looga jawaabo shuruudaha isticmaalaha: Tusaale ahaan, haddii isticmaaluhu uga tago macluumaadkooda shaqsiyeed nooc kasta oo ka mid ah foomamka xiriirka, waxaan u adeegsan karnaa macluumaadkan si aan uga jawaabno codsigaaga oo aan uga jawaabno wixii shaki ah, cabashooyinka, faallooyinka ah ama walaac ah ee soo bixi kara la xidhiidha macluumaadka ku jira Websaydhka, adeegyada lagu bixiyo Websaydhka, ka shaqaynta xogtaada shakhsi ahaaneed, su'aalaha ku saabsan qoraallada sharciga ah ee ku jira Websaydhka, iyo sidoo kale wixii su'aalo ah ee aad qabto.
Si loo maareeyo liisaska isdiiwaangalinta, u dir wargeysyada, xayeysiinta iyo dalabyada qaaska ah, kiiskan, waxaan kaliya u isticmaali doonnaa cinwaanka emaylka iyo magaca uu adeegsaduhu bixiyo markii la sameynayo rukummada.
Si loo dhexdhexaadiyo oo looga jawaabo faallooyinka ay isticmaaleyaashu ku soo qoraan baloogga.
Si loo damaanad qaado u hoggaansanaanta shuruudaha isticmaalka iyo sharciga ku habboon. Tan waxaa ka mid noqon kara horumarinta aaladaha iyo algorithms ka caawiya degelkan inuu damaanad qaado qarsoodiga xogta shakhsiga ah ee ay ururinayso.
Si loo taageero oo loo horumariyo adeegyada ay bixiyaan websaydhkan.
Si aad ugu suuq geyso badeecada iyo adeegyada lagu bixiyo boggan internetka.
Xaaladaha qaarkood, macluumaadka ku saabsan booqdayaasha boggan waxaa loo wadaagaa si qarsoodi ah ama isku-darka qaybaha saddexaad sida xayeysiiyayaasha, kafaala-qaadeyaasha ama la-hawlgalayaasha iyada oo ujeeddadu tahay kaliya in la wanaajiyo adeegyadayda iyo la-maalgalinta barta internetka. Howlahan oo dhan waxaa lagu habeyn doonaa iyadoo la raacayo qawaaniinta sharciga iyo dhammaan xuquuqahaaga ku saabsan ilaalinta macluumaadka waa la ixtiraami doonaa iyadoo la raacayo qawaaniinta hadda jirta.
Xaalad kasta, adeegsaduhu wuxuu leeyahay xuquuq buuxda oo ku saabsan xogtooda shaqsiyadeed iyo isticmaalkooda waxaana laga yaabaa inay ku jimicsi karaan waqti kasta.
Si kastaba ha noqotee degelkani uma wareejin doono xogta shaqsiyadeed ee adeegsigeyaasheeda dhinac saddexaad iyagoon hore u soo sheegin iyo codsashada oggolaanshahooda.
Howlaha ay bixiyaan dhinacyada sadexaad websaydhkan
Si loo bixiyo adeegyo si adag lagama maarmaan u ah horumarinta waxqabadkeeda, Online SL waxay la wadaagtaa xogta bixiyeyaasha soo socda iyagoo ku hoos jira xaaladaha u gaarka ah ee asturnaanta.
Marti gelinta: cubenode.com
Qalabka shabakadda: WordPress.org
Adeegyada waraaqaha iyo waraaqaha waraaqaha: MailChimp 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.
Kaydinta daruurta iyo kaydinta: Dropbox -Drive, Wetransfer, Adeegga Websaydhada Amazon (Amazon S3)
Nidaamyada xog aruurinta shaqsiyadeed ee websaydhkan aruurinayo
Boggan internetku wuxuu adeegsadaa habab kala duwan oo macluumaad shaqsiyeed. Websaydhkan ayaa had iyo jeer u baahan oggolaanshaha hore ee isticmaaleyaasha si ay u socodsiiyaan xogtooda shaqsiyadeed ujeeddooyinka la tilmaamay.
Adeeggu wuxuu xaq u leeyahay inuu ka laabto ogolaanshadiisii ​​hore waqti kasta.
Nidaamyada soo qabashada macluumaadka shakhsiyeed ee ay adeegsadaan kuwa raacsan.online :
Foomamka is-qoritaanka Shabakadda dhexdeeda waxaa ku yaal dhowr foom oo lagu kiciyo rukunka. Ka eeg sanduuqaaga emailka. Isticmaaluhu waa inuu xaqiijiyaa diiwaangelintooda si uu u ansaxiyo cinwaanka emaylkooda. Xogta la bixiyay waxaa loo isticmaali doonaa si gaar ah in loo diro Warsidaha oo lagula socodsiiyo wararka iyo dalabyada gaarka ah, oo u gaar ah macaamiisha es. Warsidaha waxaa maamula MailChimp
Markaad adeegsanayso adeegyada barnaamijka 'MailChimp' oo ah samaynta ololayaasha suuqgeynta emaylka, maareynta isdiiwaangelinta iyo dirista joornaalada, waa inaad ogaataa in MailChimp Waxay leedahay macaamiisheeda kuyaalla gudaha Mareykanka oo markaa macluumaadkaaga shaqsiyadeed waxaa loo wareejin doonaa si caalami ah waddan loo arkaa mid aan aamin aheyn ka dib markii la baabi'iyey Safe Harbor. Markaad sameysatid rukhsad, waad oggolaaneysaa oo oggolaaneysaa in xogtaada lagu keydiyo madal MailChimp, oo saldhigeedu yahay Mareykanka, si aad u maamusho dirista waraaqaha is-dhaafsiga. Boostada waa la waafajiyay ilaa heerka halbeega EU ee ku saabsan ilaalinta xogta.
Foomka Jawaab-celinta: Websaydhka waxaa ku jira foom si aad uga faallooto boostada. Isticmaaluhu wuxuu ku dhejin karaa faallooyinka farriimaha la daabacay. Macluumaadka shakhsiga ah ee lagu qoray foomka si loogu daro faallooyinkaas waxaa loo isticmaali doonaa oo kali ah si dhexdhexaad ah oo loo daabaco.
Foomka Xiriirka: Waxa kale oo jira foom lagala xidhiidho wixii su'aalo ah, talo bixin ama xiriir xirfadle. Xaaladdan oo kale cinwaanka emaylka ayaa loo adeegsan doonaa si looga jawaabo iyaga loona diro macluumaadka uu adeegsaduhu uga baahan yahay websaydhka.
cookies: Marka isticmaaleha uu diiwaan geliyo ama ku wareego degelkan websaydhada, “cookies” ayaa la keydiyaa, Adeeggu wuu tashan karaa wakhti kasta siyaasada cookie si loo ballaariyo macluumaadka ku saabsan isticmaalka kukiyada iyo sida loo baabi'iyo.
Soo dejinta Nidaamyada: Degelkan waxaad ka soo degsan kartaa waxyaabo kala geddisan oo mar mar la isugu daro qoraalka, fiidiyoowga iyo qaab maqal. Xaaladdan oo kale, emayl ayaa loo baahan yahay si loo dhaqaajiyo foomka is-qoritaanka. Macluumaadkaaga waxaa loo isticmaalaa ujeeddooyinka lagu muujiyey macaamiisha.
Iibinta daabacaada: Bogga waxaad ka iibsan kartaa daabacadaha iyo macluumaadka wax soo saarka ee Online SL, xaaladdan, xogta iibsadaha ayaa loo baahan yahay (Magaca, magaca, iyo taleefanka, cinwaanka boostada iyo e-.mail) iyadoo loo marayo nidaamka Paypal oo ah qaab lacag bixin ah .
Isticmaalayaasha way awoodaan ka bixi rukhsad wakhti kasta adeegyada ay ku bixiyaan dadka raacsan khadka tooska ah isla Joornaalka.
Adeeggu wuxuu ka heli doonaa boggan dhexdiisa, bogag, dallacsiin, kafaala-qaadeyaal, barnaamijyada xiriirka la leh u adeegsada hab-dhaqannada adeegsadaha si ay u aasaasaan magacyada isticmaaleyaasha oo u muujiyaan xayeysiiska isticmaalaha ee ku saleysan danahooda iyo caadooyinkooda daalacashada. Macluumaadkan marwalba waa qarsoodi oo adeegsadaha lama aqoonsana.
Macluumaadka lagu bixiyo bogaggan maal-galiyay ama xiriirinta xiriirka la leh waxay ku xiran yihiin siyaasadaha gaarka ah ee loo adeegsado bogaggaas ma ku hoos dhici doono siyaasaddan asturnaanta. Sidaa darteed, waxaan si adag ugula talineynaa Users inay si faahfaahsan u eegaan siyaasadaha gaarka ah ee xiriirada xiriirka.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee xayeysiinta lagu siiyay Adsense: Adsense Google.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee ilaha daba-galka ee loo adeegsaday bartan:Google (Falanqaynta)
In followers.online waxaan sidoo kale baranaynaa dookhyada adeegsadayaasheeda, astaamahooda dadka, qaababka taraafikada, iyo macluumaadka kale si wada jir ah si aan sifiican ugu fahmo cida dhagaystayaasheena tahay iyo waxa ay ubaahan yihiin Raadinta doorbidyada isticmaaleyaasheena sidoo kale waxay naga caawineysaa inaan ku tusno xayeysiisyada ugu habboon.
Isticmaalaha iyo, guud ahaan, qof kasta oo dabiici ah ama sharci ah, wuxuu abuuri karaa aaladda 'hyperlink' ama aaladda xiriirinta farsamada (tusaale ahaan, xiriiriyeyaasha ama badhannada) websaydhkooda illaa followers.online ("Hyperlink"). Abuuritaanka Hyperlink macnaheedu ma aha xaalad kastoo jirta jiritaanka cilaaqaadka u dhexeeya followers.online iyo mulkiilaha goobta ama bogga uu ku yaalo Hyperlink, ama aqbalaadda ama oggolaanshaha dadka raacsan khadka tooska ah ee ay ka kooban yihiin ama adeegyada. Si kastaba xaalku ha ahaadee, followers.online waxay xaq u leeyihiin in ay mamnuucaan ama joojiyaan wax xiriirin ah oo shabakada ah waqti kasta.
Isticmaalayaasha way awoodaan ka bixi rukhsad wakhti kasta adeegyada ay bixiyaan kuwa raacsan.waxayna isla joornaalada.
Saxnimada iyo hufnaanta macluumaadka
Isticmaaluhu wuxuu dammaanad qaadayaa in xogta shakhsiga ah ee lagu bixiyay noocyada kala duwan ay run tahay, laguna qasbay inay la xiriiraan wax ka beddelkeeda. Sidoo kale, Isticmaaluhu wuxuu dammaanad qaadayaa in dhammaan macluumaadka la bixiyay ay u dhigmaan xaaladdooda dhabta ah, inay tahay mid casriyeysan oo sax ah. Intaas waxaa sii dheer, Isticmaaluhu wuxuu ballan qaadayaa inuu xogtooda cusbooneysiiyo marwalba, isagoo keligiis mas'uul ka ah khaldamida ama been abuurka xogta la bixiyay iyo waxyeelada ka dhalan karta tan Online Online oo ah milkiilaha bogga raacsan.online.
Jimicsi xuquuqda helitaanka, sixitaanka, joojinta ama mucaaradka
Xuquuqda Isticmaalayaasha ayaa ah kuwan soo socda:
Xaq ayaad u leedahay inaad weydiiso waxa xogta shaqsiyeed ee aan kaydinno ku saabsan Isticmaalaha waqti kasta.
Xuquuqda inaad na weydiisato inaan cusboonaysiinno ama sixi karno xogta bilaashka ah ee aan khaldanayn ama dhacday ee aan ku kaydsanay Adeegga.
Xaq ayaad u leedahay in aad iska saarto rukhsad kasta oo isgaarsiineed oo aan u diri karno Adeegga.
Waad hagi kartaa isgaarsiintaada waxaadna isticmaali kartaa xuquuqda marin u hel, sixitaan, baajin iyo mucaarad boostada boostada ee. ama emaylka: info (at) followers.online oo ay weheliso cadeyn sax ah oo sharciga ah, sida nuqul ka mid ah DNI ama wax u dhigma, oo muujinaya maadada "DATA ILAALINTA".
Isticmaaluhu wuxuu cadeynayaa in lagu wargaliyay shuruudaha ilaalinta macluumaadka shakhsiga ah, aqbalaada iyo ogolaanshaha daaweynta ee Online SL habka iyo ujeedooyinka lagu tilmaamay ogeysiiska sharciga ah.
Isbedelada siyaasadan qaaska ah
Khadka tooska ah ee loo yaqaan 'SL' wuxuu xaq u leeyahay inuu wax ka beddelo siyaasaddan si loogu waafajiyo sharciga cusub ama qaanuunka iyo sidoo kale la dhaqanka warshadaha. Xaaladaha noocaas ah, Bixiyuhu wuxuu ku dhawaaqi doonaa boggan isbeddelada la soo saaray iyadoo la filaayo macquul ahaan filashadooda.
Iyadoo la raacayo LSSICE, Online SL ma fuliso dhaqamada SPAM, sidaa darteed uma dirto emayllo ganacsi oo aan horey u codsan ama u oggolaanin Isticmaaluhu, mararka qaarkood, waxay u diri kartaa dallacsiinteeda iyo dalabkeeda iyo dhinacyada saddexaad, kaliya kiisaska aad haysato oggolaanshaha dadka qaata. Sidaa awgeed, mid kasta oo ka mid ah foomamka ku yaal Websaydhka, Isticmaaluhu wuxuu leeyahay suurtagalnimada inuu ku siiyo ogolaanshahooda degdega ah inuu ku helo "Wargeyskayga", iyadoon loo eegin macluumaadka ganacsi ee la codsaday waqtigiisa. Waxaad sidoo kale kansali kartaa si toos ah isla isla Wargeysyada.
© 2022 - Raacayaal ▷➡️
Casharrada Joojinta Hal-abuurka leh ee ciyaaraha